Swedishka iyo Soo galootiga | Somaliska
Sidee u arkaan dadka Swedishka ahi soo galootiga ku soo qulqulaya dalkooda? Cilmi baaris uu sameeyay machadka SOM-Institutet ee ka tirsan Jaamacada Göteborgs universitet ayaa lagu soo bandhigay in aragtida ay ka qabaan Swedishku soo galootiga ay soo hagaageyso. Iyadoo sanadkii 2010 ay 46% ka soo horjeedeen soo galootiga ayaa tiradaas hoos u dhacday sanadkaan 42%. Dadka Swedishka ah ee taageersan in qaxooti badan dalkooda soo galaan ayaa gaaraya 30%. Tiradaan la soo bandhigay ayaa ah midii ugu wanaagsaneyd ee soo baxda ilaa sanadkii 1990 ee la bilaabay ururinta firkadaan. Warbixintaan ayaa ka soo horjeeda dhacdooyinka ka socda Sweden ee ay ugu muhiimsantahay taageerada siyaaday ee xisbiga Cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) kuwaasoo mowduucooda ugu sareeya uu yahay ka hortaga soo galootiga. Aragtida Swedishku ay ka qabaan soo galootiga ee soo wanaagsanaaneysa ayaa lagu macneeyay in ay sabab u tahay horumarka xaga waxbarashada iyo dhaqaalaha ee ay ku tilaabsadeen bulshada Sweden, iyadoo la sheegay in isku xiranka caalamka uu wadada u furayo in cunsuriyadu ay yaraato.
Sidee u arkaan dadka Swedishka ahi soo galootiga ku soo qulqulaya dalkooda? Cilmi baaris uu sameeyay machadka SOM-Institutet ee ka tirsan Jaamacada Göteborgs universitet ayaa lagu soo bandhigay in aragtida ay ka qabaan Swedishku soo galootiga ay soo hagaageyso. Iyadoo sanadkii 2010 ay 46% ka soo horjeedeen soo galootiga ayaa tiradaas hoos u dhacday sanadkaan 42%.
Dadka Swedishka ah ee taageersan in qaxooti badan dalkooda soo galaan ayaa gaaraya 30%. Tiradaan la soo bandhigay ayaa ah midii ugu wanaagsaneyd ee soo baxda ilaa sanadkii 1990 ee la bilaabay ururinta firkadaan.
Warbixintaan ayaa ka soo horjeeda dhacdooyinka ka socda Sweden ee ay ugu muhiimsantahay taageerada siyaaday ee xisbiga Cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) kuwaasoo mowduucooda ugu sareeya uu yahay ka hortaga soo galootiga.
Aragtida Swedishku ay ka qabaan soo galootiga ee soo wanaagsanaaneysa ayaa lagu macneeyay in ay sabab u tahay horumarka xaga waxbarashada iyo dhaqaalaha ee ay ku tilaabsadeen bulshada Sweden, iyadoo la sheegay in isku xiranka caalamka uu wadada u furayo in cunsuriyadu ay yaraato.